အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်စံချိန်တင် ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပွဲများ
20 Nov 2018 . 5:14 PM
လန်ဒန်နာမည်ကျော် ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ စပါးအသင်းဟာ လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကျရင် ကွင်းသစ်ကြီးမှာ ပြောင်းရွှေ့ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်လန်ဒန်ကလပ် စပါးအသင်းဟာ အခုလောလောဆယ် ၀င်ဘလေကွင်းမှာ ကစားနေပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း သူတို့ရဲ့ ၀ှိုက်ဟတ်လိန်းကွင်းကနေ ကွင်းသစ်ကြီးကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေကြောင့် လာမယ့်နှစ်အထိ စောင့်ဆိုင်းရတော့မှာပါ။ ၀ှိုက်ဟတ်လိန်းကွင်းဟာ ပရိသတ်(၃)သောင်းကျော်သာ ၀င်ဆံ့ပြီး ကွင်းသစ်ကြီးကတော့ (၆)သောင်းကျော် ၀င်ဆံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းသစ်ကြီးဟာ လန်ဒန်မြို့မှာ ၀င်ဘလေကွင်းပြီးရင် ဒုတိယအကြီးဆုံး ကွင်းဖြစ်လာမယ့်အပြင် မြို့ခံပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အီမရိတ်စ်ကွင်(၅၉၆၈၇ဦး)ထက် ပိုကြီးမားတဲ့ကွင်းဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကွင်းသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ရင်လည်း စပါးအသင်းဟာ သူတို့တင်ရှိထားတဲ့ ပရိသတ်ကြည့်ရှုမှု အများဆုံး စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်ကြည့်ရှုမှု အများဆုံးပွဲတွေက ဘယ်ပွဲတွေလဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတရရှိအောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . . . .
အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်ကြည့်ရှုမှု အများဆုံးပွဲများ
72,841 attendance at Hillsborough (v Manchester City) – FA Cup fifth round (February 17, 1934)
73,707 attendance at Wembley (v RC Lens) – Champions League group stage (November 25, 1998)
75,031 attendance at The Valley (v Aston Villa) – FA Cup fifth round (February 12, 1938)
75,118 attendance at Roker Park (v Derby County) – FA Cup sixth round replay (March 8, 1933)
76,588 attendance at Villa Park (v Derby County) – FA Cup sixth round first leg (March 2, 1946)
78,299 attendance at Goodison Park (v Liverpool) – First Division (September 18, 1948)
82,905 attendance at Stamford Bridge (v Arsenal) – First Division (October 12, 1935)
83,260 attendance at Maine Road (v Arsenal) – First Division (January 17, 1948)
84,569 attendance at Maine Road (v Stoke City) – FA Cup sixth round (March 3, 1934)
85,512 attendance at Wembley (v Bayer Leverkusen) – Champions League group stage (November 2, 2016)
ဒီစာရင်းအရ အင်္ဂလန်သမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်ကြည့်ရှုမှု အများဆုံးပွဲအဖြစ် ၂၀၁၆၊ နိုဝင်ဘာလ (၂)ရက်တုန်းက ၀င်ဘလေမှာ ကစားခဲ့တဲ့ စပါးနဲ့ လေဗာကူဆင်အသင်းတို့ပွဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ် (၈)သောင်းခွဲအထိ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်။ မန်ချက်စတာမြို့ခံနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ မန်ယူတို့က အဆင့်(၂)၊ (၃)နေရာတွေမှာ အသီးသီးရပ်တည်နေတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ အင်္ဂလန်မှာ အကြီးဆုံးကွင်းက ၀င်ဘလေကွင်းဖြစ်ပြီး ပရိသတ်(၉)သောင်းအထိ ၀င်ဆံ့လို့ စပါးအသင်းရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ကတော့ ကာလအတော်ကြာဦးမယ့် အနေအထားပါပဲ . . .
အင်ျဂလနျဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရိသတျစံခြိနျတငျ ကွညျ့ရှုခဲ့တဲ့ပှဲမြား
လနျဒနျနာမညျကြျော ကလပျအသငျးဖွဈတဲ့ စပါးအသငျးဟာ လာမယျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈကရြငျ ကှငျးသဈကွီးမှာ ပွောငျးရှကေ့စားတော့မှာဖွဈပါတယျ။ မွောကျလနျဒနျကလပျ စပါးအသငျးဟာ အခုလောလောဆယျ ဝငျဘလကှေငျးမှာ ကစားနပွေီး စကျတငျဘာလအတှငျး သူတို့ရဲ့ ဝှိုကျဟတျလိနျးကှငျးကနေ ကှငျးသဈကွီးကို ပွောငျးရှဖေို့ စီစဉျခဲ့ပမေယျ့လညျး နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာမှုတှကွေောငျ့ လာမယျ့နှဈအထိ စောငျ့ဆိုငျးရတော့မှာပါ။ ဝှိုကျဟတျလိနျးကှငျးဟာ ပရိသတျ(၃)သောငျးကြျောသာ ဝငျဆံ့ပွီး ကှငျးသဈကွီးကတော့ (၆)သောငျးကြျော ဝငျဆံ့မှာဖွဈပါတယျ။
စပါးအသငျးရဲ့ ကှငျးသဈကွီးဟာ လနျဒနျမွို့မှာ ဝငျဘလကှေငျးပွီးရငျ ဒုတိယအကွီးဆုံး ကှငျးဖွဈလာမယျ့အပွငျ မွို့ခံပွိုငျဘကျ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အီမရိတျဈကှငျ(၅၉၆၈၇ဦး)ထကျ ပိုကွီးမားတဲ့ကှငျးဖွဈလာမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကှငျးသဈကို ပွောငျးရှကေ့စားခဲ့ရငျလညျး စပါးအသငျးဟာ သူတို့တငျရှိထားတဲ့ ပရိသတျကွညျ့ရှုမှု အမြားဆုံး စံခြိနျကို ခြိုးဖွတျနိုငျဦးမှာ မဟုတျသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အင်ျဂလနျဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရိသတျကွညျ့ရှုမှု အမြားဆုံးပှဲတှကေ ဘယျပှဲတှလေဲဆိုတာကို ပရိသတျတှေ ဗဟုသုတရရှိအောငျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ . . . .
အင်ျဂလနျဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရိသတျကွညျ့ရှုမှု အမြားဆုံးပှဲမြား
ဒီစာရငျးအရ အင်ျဂလနျသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရိသတျကွညျ့ရှုမှု အမြားဆုံးပှဲအဖွဈ ၂၀၁၆၊ နိုဝငျဘာလ (၂)ရကျတုနျးက ဝငျဘလမှော ကစားခဲ့တဲ့ စပါးနဲ့ လဗောကူဆငျအသငျးတို့ပှဲဖွဈပွီး ပရိသတျ (၈)သောငျးခှဲအထိ လာရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ကွတယျ။ မနျခကျြစတာမွို့ခံနှဈသငျးဖွဈတဲ့ မနျစီးတီးနဲ့ မနျယူတို့က အဆငျ့(၂)၊ (၃)နရောတှမှော အသီးသီးရပျတညျနတောကိုလညျး တှရေ့မှာပါ။ အင်ျဂလနျမှာ အကွီးဆုံးကှငျးက ဝငျဘလကှေငျးဖွဈပွီး ပရိသတျ(၉)သောငျးအထိ ဝငျဆံ့လို့ စပါးအသငျးရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျဖို့ကတော့ ကာလအတျောကွာဦးမယျ့ အနအေထားပါပဲ . . .